Ch A K Ava Nzik A Chamwari - PDF Download
Ch A K Ava Nzik A Chamwari-PDF Download
Share Pdf : Ch A K Ava Nzik A Chamwari
Download and Preview : Ch A K Ava Nzik A Chamwari
Report CopyRight/DMCA Form For : Ch A K Ava Nzik A Chamwari
Bhaibheri rinoti Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nekusingaperi saka kana Aikwanisa kuita chishamiso makore zviuru zviviri zvapfuura zvino Anogona kuita zvimwe chete nhasi Akativimbisa kuti takapora kana dai tikangotenda chete Isu tose tinogona kuvhura mapeji eBhaibheri toona kuti Mwari anoita zvishamiso Mosesi akapatsanura
ZVIRI Zviri Mukati,MWARI ACHIRI KUITA HERE,MABASA MAKURU SEZVAAKAITA. MUBHAIBHERI,WAKAMBOZVIBVUNZA HERE KUTI SEI,UCHIFANIRA KUBHABHATIDZWA. NEKUNGOTI URI NHENGO YACHECHI,ZVINOREVA HERE KUTI WAKAPONESWA. 2 Zvishamiso ZveMweya,CHII CHAICHO CHAKANYATSOITIKA. 8 Kutongwa PAKATI PENYOKA NAEVHA MUBINDU,WAIZIVA HERE KUTI BHAIBHERI.
RINOVIMBISA KUTI CHAKAVANZIKA,16 Hupenyu Hunotevera CHAMWARI CHAIZOPEDZISWA. MUMAZUVA ANO EKUPEDZISIRA,22 Chivi Chepakutanga,YAVE NGUVA YEKUTI ZVAKAVANZIKA. 28 Zuva RaJehovha Rinotyisa ZVIKINURWE NEKUZARURWA KUNYIKA. UNODA HERE KUNZWA SHOKO,RAMWARI RECHOKWADI,www mharidzo org. VOICE OF GOD RECORDINGS Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe. P O Box 412 kana otanga kuridza zvakavanzika zvaMwari. Harare Zimbabwe,8 St Annes Road Avondale Harare,zvichapedziswa sezvaakaparidzira kuvaranda vake. 00263 4 303847 vaporofita ZVAKAZARURWA 10 7,ZVISHAMISO ZVEMWEYA.
Zvishamiso ZveMweya,Johane 14 12,Zvirokwazvo zvirokwazvo. multiple sclerosis apo takamunamatira,Ndinoti kwamuri Unotenda. Fungai pamusoro paFlorence Nightingale,kwandiri mabasa aNdinoita. mbuya vake muvambi weRed Cross akanga,iye achaaitawo uchaita. orema mapaundi angaita makumi matanhatu,makuru kuna iwaya nokuti.
achitandadza ave kufa nekenza yemumatumbu,Ndinoenda kuna Baba. madiki emudumbu avetepo achifa Kanjiva,Marko 16 17 18. kadiki kakabhururukira muchikwenzi ipapo, Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda Vachadzinga ndokubva Mweya waMwari wauya ukati. mweya yakaipa nezita rangu vachataura nendimi itsva ZVANZI NAJEHOVHA achararama Zvino. Vachabata nyoka kunyangwe vakanwa chinhu chinouraya anorema mapaundi zana nemakumi mashanu. hachingavarwadzi vachaisa maoko pamusoro pavarwere ane mashanu akagwinya zvizere. uye vachapora Fungai nezvaCongressman Upshaw akagara. akasungirwa kumacheya nemubhedha,Isu tose tinogona kuvhura mapeji eBhaibheri toona. kwegore negore kwemakore makumi,kuti Mwari anoita zvishamiso Mosesi akapatsanura.
matanhatu nenhanhatu Uye nenguva isipi,Gungwa Dzvuku Eriya akadana nzara Jesu akafamba. akasimuka netsoka dzake akamhanya,pamvura uye vadzidzi vakapodza varwere. nemuchivakwa ndokubata zvigunwe zvake, Pane zviuru zvezviitiko zvinoshamisa zvakanyorwa zvemutsoka akanatswa zvizere. muBhaibheri Kana Mwari vachipupurira nemashura Chingofungai zviuru nezviuru zvevanhu. nezviratidzo ko zvino zvishamiso zvaKe zviri kupi vakapodzwa Tingagarireiko pano kusvika tafa. nhasi uno Anogona here kupodza kenza sekupodza Ngatiitei chimwe chinhu pamusoro pazvo. kwaAkaita maperembudzi muBhaibheri Ko AIDS, Iva nokutenda kana uchirwara kana kuti uine chishuwo. nemalaria Achiri kugona kuita chishamiso here,Bhaibheri rinoti Jesu Kristu unogara akadaro zuro.
Hongu Mwari vachiri kuita zvishamiso uye zviratidzo. nanhasi nekusingaperi saka kana Aikwanisa kuita,izvi zvinotevera avo vanotenda. chishamiso makore zviuru zviviri zvapfuura zvino, Zvino tarirai shamwari fungai pamusoro Anogona kuita zvimwe chete nhasi Akativimbisa kuti. paMambo George weEngland paakapodzwa takapora kana dai tikangotenda chete. William D Tris, Upshaw Griffin akaenda kuhofisi kwachiremba pakutanga kwa2013 nekuda. kwemarwadzo emusana aaityira kuti zvichida kwaiva kudzoka kwekurwisana. akashanda makore, kwake nekenza MRI yakaratidza kutsemuka kwetsinga mumoyo wake. masere ari muUnited, zvakakonzera kuti vanachiremba vaite dzimwe ongororo nekuronga.
States House Of, kuvhiya zvechimbichimbi zuva raitevera Mutsetse uri kupinda nemumoyo. Representatives, mumufananidzo kutsemuka kuri pachena kunogona kureva potse rufu. akakwikwidza,nenguva isipi kana kukapamuka,kuzova mutungamiri. wenyika muna 1932,Tsaona papurazi,yakamuomesa,mutezo achiri. mwana akararama,makore 66 ari,pamadondoro kana,kuti muhwiricheya.
Muna 1951 akapodzwa,zvizere akafamba,zvakanakisa upenyu. hwake hwese,Nightingale,hama yekure,yemukoti ane,mbiri aiva. nekenza inouraya,mufananidzo,uyu sechikumbiro,chekupedzisira. chemunamato kenza,isati yazomuuraya,Sekuona kwamuri. kuita akanga asvika,pachinhano chekufa,Ishe Jesu vasati.
vamupodza muna,1950 Mufananidzo,wakatorwa mushure,mekupodzwa. kwake ukatumirwa,sechapupu chekuti,Mwari vachiri,kupodza varwere. Zuva rakatevera mushure mekunge vatendi vamunamatira vanachiremba Tsigiro. vakaita imwe CT scan kuti vanyatsoona pane kutsemuka uku vasati. vatanga kuvhiya Panguva ino mifananidzo yakaratidza moyo une utano. Mapisarema 103 2 3, Rumbidza JEHOVHA O mweya wangu urege kukanganwa makomborero ake. uzere Nekushamisika chiremba wekuvhiya akaudza Mai Griffin Handizive. Iye anokanganwira zvakaipa zvako zvese anoporesa kurwara kwako kwese. zvekukutaurirai Manga muine tsinga yakachekeka asi zvino umboo hwacho. hwese hapachina Akamuratidza mifananidzo asati anamatirwa uye zvadaro Isaya 53 5. mushure mezvo Makasununguka kuenda uye zvakare hapana chiratidzo Asi wakakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu akarwadziwa nekuda kwezvakaipa zvedu. chekenza zvakare Mune hutano huzere kurohwa kwakatiunzira rugare kwakanga kuri pamusoro pake uye takaporeswa nemavanga ake. Marko 16 17, Zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda Vachadzinga mweya yakaipa nezita rangu vachataura. nendimi itsva, Ishe akati Kana maiva nekutenda kwakaita setsanga yemastardha maiti kumuonde uyu.
Dzurwa usimwe mugungwa uye uchakutererai,Johane 14 12. Zvirokwazvo zvirokwazvo Ndinoti kwamuri Unotenda kwandiri mabasa andinoita iye. uchaaitawo uchaita makuru kuna iwawa nekuti ndinoenda kunaBaba. I VaTesaronika 1 5, Nekuti evhangeri yedu haina kuuya kwamuri neshoko bedzi asi nesimbawo neMweya Mutsvene. nokuziva kwazvo sezvamunoziva kuti takanga takadini pakati penyu nekuda kwenyu. VaHebheru 2 3 4, Ko isu tichatiza sei kana tisina hanya nekuponeswa kukuru kwakadai uku kwakaparidzwa. pakutanga naShe kukasimbiswa kwatiri naivo vakamunzwa. Naiye Mwariwo achipupurirana navo nezviratidzo nezvinoshamisa nemabasa esimba. mazhinji nezvipo zveMweya Mutsvene nokuda kwake,VaHebheru 13 8. Jesu Kristu unogara akadaro zuro nanhasi nekusingaperi. Jakobho 5 15, Kunyengetera kwokutenda kuchaponesa anorwara Ishe uchamumutsa kana akaita zvivi.
achazvikanganwirwa,I Petro 2 24, Iye akatakura amene zvivi zvedu mumuviri wake pamuti kuti isu kana tafa kuzvivi tiraramire. zvakarurama iye wamakaporeswa namavanga ake,kuruboshwe Chinongedzo. chachiremba chakanongedzera,patsinga yeropa inova nzvimbo. yedenderedzwa rakasvibira,iri pakati pemufananidzo. Mutsetse uri mairi ndiko,kupatsanuka kana kutsemuka.
kwetsinga yeropa kunoda,kurapwa pakarepo uye munhu. anofa ikapamuka pamusoro,Ongororo yepiri yakatorwa zuva. rakatevera Kutsemuka kwakange,kwanyangadika zvachose. kukasambodzoka, Mapisarema 96 13 vari kudenga VeAssemblies of God vanotiudza. Pamberi paJEHOVHA nokuti kuti kutaura nendimi ndicho chiratidzo chekutanga. anouya nokuti anouya cheMweya Mutsvene iye Pauro akati Kunyange. kuzotonga pasi achatonga ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa ndisina. nyika zvakarurama rudo ndava sendarira dzinorira kana nedare rinongoti. nendudzi nokutendeka ngwere ngwere I VaKorinte 13 1. kwake Potse masangano ese anokurumidza kutiudza,kuti zvinhu zvakawanda zviri muBhaibheri hazvina.
Pane zviuru zvemasangano akasiyana munyika nhasi kuturikirwa kwazvo zvakarasika mududziro kana kuti. Chinamato chega chega chinopomera chimwe asi hazvisi maererano nenyika yanhasi Saka tinofanira. vachivimbisa ruponeso kubudikidza nemusangano here kutenda Bhaibheri kana dzidziso dzemasangano. ravo Tingaziva sei ratingasarudza Mwari achashandisei sechiero chekutonga. Kana tikasarudza chechi yeKatorike zvino Dai ndaibvunza weChikatorike pano manheru. tinogamuchira kurevererwa nevasande zvisina ano Chii chaunofunga kuti Mwari achatonga. kumbosiyana nekunamata zvifananidzo Bhaibheri nyika nacho Mukatorike anoti NeChechi. rinoti Nekuti kunongova naMwari mumwe yeKatorike Zvakanaka zvino ipi Chechi. chete nemurevereri mumwe chetewo pakati yeKatorike Zvino vane yeRoma Greek. pavanhu naMwari ndiye munhu Kristu Jesu Orthodox nemamwe akawanda Ingava Chechi. I Tim 2 5 Muprisita anodanwa kunzi Baba,ipi yeKatorike VeRutherani vanoti Nesu. zvinova zvakarambidzwa naJesu muna Mateo zvino imi veBaptisti muri kunze Uye kana. 23 9 Musadaidza munhu ari panyika kuti baba tikati NeveBaptisti zvino imi vePentecosti. venyu nekuti mumwe chete ndiBaba venyu ivo mave kunze Saka paizova nenyonganyonga. yekuti hapana aizoziva zvekuita saka iYe,haana kuvimbisa kutonga nyika nekereke. Akavimbisa kutonga nyika naKristu uye Kristu,iShoko Zvino Bhaibheri ndiro richatonga. nyika rinova Jesu Kristu mumwe chete zuro,nhasi nekusingaperi. Johane 1 1, Pakutanga Shoko rakanga riripo Shoko rakanga riri kuna Mwari Shoko rakanga riri Mwari.
Johane 1 14, Shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu tikaona kubwinya kwake kubwinya. sekwewakaberekwa mumwe chete waBaba azere nyasha nezvokwadi. Johane 5 22, Nokuti Baba havatongi munhu asi vakapa Mwanakomana kutonga kwese. Johane 12 48, Unondiramba asingagamuchiri mashoko angu ane mumwe anomutonga shoko randakareva. ndiro richamutonga nezuva rekupedzisira,VaEfeso 1 5 7. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vana vake sezvaakafadzwa pakuda kwake. Kuti kunaka kukuru kwenyasha dzake dzaakangotipa hake mumudikanwa wake kurumbidzwe. Uyo watine dzikinuro maari neropa rake iko kukanganwirwa kwekudarika kwedu. nokuwanda kwenyasha dzake,VaEfeso 2 5 8, Kunyange takanga takafa mukudarika kwedu wakatiraramisa pamwe chete naKristu.
makaponeswa nenyasha, Akatimutsa pamwe chete naye akatigarisa kudenga pamwe chete naye muna Kristu Jesu. Kuti nenguva dzinouya aratidze pfuma huru huru yenyasha dzake paunyoro hwake kwatiri muna. Kristu Jesu, Nokuti makaponeswa nenyasha kubudikidza nekutenda izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo. chaMwari Need Photo,I Johane 1 7, Asi kana tichifamba muchiedza saiye ari pachiedza tinoyanana isu neropa raJesu Kristu. Mwanakomana wake rinotinatsa pazvivi zvose,Zvakazarurwa 22 18 19. Ndinopupurira mumwe nomumwe unonzwa mashoko okuporofita kwebhuku iyi Kana munhu. akawedzera pazvinhu izvi Mwari achawedzera kwaari madambuziko akanyorwa mubhuku iyi. Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yekuporofita uku Mwari achabvisa mugove wake. mubhuku reupenyu nemuguta dzvene napazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi. Marko 16 16,Uyo anotenda akabhabhatidzwa,achaponeswa asi asingatendi.
achatongwa,Mabasa AvaApostora 2 38,Petro akati kwavari Tendeukai mumwe nemumwe. wenyu abhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu kuti,mukanganirwe zvivi mupiwe chipo choMweya Mutsvene. Zviri pachena rubhabhatidzo runokosha zvikuru,asi zvine basa here kuti tabhabhatidzwa sei Pane. kubhabhatidzwa chaiko here kana kuti chero chinhu,chingaita Kana uchitenda Bhaibheri zvino HONGU. pane rubhabhatidzo chairwo,Machechi mazhinji anobhabhatidza muZita raBaba.
Mwanakomana neMweya Mutsvene asi izvi handizvo,maererano neBhaibheri. Muna Mabasa Avaapostora 19 paiva nevamwe vanhu,vaitotenda pana Jesu Kristu nechekare asi vakanga. vasati vagamuchira Mweya Mutsvene mumoyo yavo,Muapostora Pauro aiziva nzira kwayo yekugamuchira. Mweya Mutsvene saka akavabvunza Ko,makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupiko Vakati. Norubhabhatidzo rwaJohane Mabasa Avaapostora, 19 3 Pauro akaona kuti vakanga vasina kubhabhatidzwa.
maererano nerairo yaPetro muna Mabasa Avaapostora,2 38 saka akavaraira kuti vabhabhatidzwe zvakare. nemuZita raIshe Jesu Zvadaro sezvakavimbiswa,vakagamuchira Mweya Mutsvene. Saka sei vadzidzi vakabhabhatidza Mateo 28 19, nemuZita raJesu iye Jesu pachaKe Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhabhatidze nemuzita raBaba neroMwanakomana. neroMweya Mutsvene Zita raBaba ndiani ReMwanakomana ReMweya Mutsvene. akavaudza kuti vabhabhatidze Marko 16 16, muZita kwete mazita raBaba Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa asi asingatendi achatongwa. Johane 5 43, nereMwanakomana nereMweya Ndakauya nemuzita raBaba vangu asi hamundigamuchiri kana mumwe akasvika nezita rake.
Mutsvene Mateo 28 19 Vakakanganisa amene muchamugamuchira iye Kana Akauya muZita raBaba vaKe zvino Zita raKe ndiani. Johane 10 30, here Kwete Vakaita chaizvo Ini naBaba vangu tiri mumwe. zvavakarairwa Johane 12 45,Anondiona anoona wakandituma. Pauri kuverenga chinyorwa chino Johane 14 8 9, funga pamusoro pezita rako Uri Firipo akati kwaari Ishe tiratidzei Baba zvigotiringana. Jesu akati kwaari Ndakava nemi nguva refu yakadai ko hausati wandiziva here Firipo. mwanakomana here Zita rako wandiona ini waona Baba zvino unoreva seiko uchiti Tiratidzei Baba. ndi Mwanakomana here Uri Johane 20 27 28, Ipapo akati kuna Tomasi Uya pano nemunwe wako uone zvanza zvangu uya neruoko rwako uise. amai here Zita rako ndi Amai murutivi rwangu usava usingatendi asi uchitenda. here Zvirokwazvo handizvo iwayo Tomasi akapindura akati kwaari Ishe wangu naMwari wangu. Mabasa AvaApostora 2 38 39, anongova madunhurirwa Une zita Petro akati kwavari Tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu Kristu.
rako chairo naMwariwo zvakare kuti mukanganwirwe zvivi mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene. Nokuti chipikirwa ndechenyu nevana venyu nevose vari kure vanozodanwa naShe Mwari. Heino mhinduro wedu,Mabasa AvaApostora 4 12, Zvino hapana kana chinhu chakadaro muBhaibheri Nokuti hakuna kuponeswa kune mumwe nekuti hakuna nerimwe zita pasi pedenga rakapiwa. chemunhu akambobhabhatidzwa nemuZita pakati pavanhu ratingasunungurwa naro. Mabasa AvaApostora 8 12, raBaba Mwanakomana Mweya Mutsvene nekuti Zvino vakati vatenda Firipo aiparidza mashoko eushe hwaMwari nezita raJesu Kristu. hakuna chinhu chakadaro Baba harisi zita uye vakabhabhatidzwa varume nevakadzi. Mabasa AvaApostora 19 3 6, Mwanakomana harisi zita neMweya Mutsvene Akati kwavari Ko makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupiko Vakati Nerubhabhatidzo. harisi zita asi Zita raBaba Mwanakomana Mweya rwaJohane. Zvino Pauro akati Johane akabhabhatidza nerubhabhatidzo rwekutendeuka achiudza vanhu kuti. Mutsvene ndiIshe Jesu Kristu vatende kuna iye anozouya shure kwake iye Kristu Jesu. Vakati vazvinzwa izvo vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Jesu Kristu ndiMwari Ndiye Baba Mwanakomana Zvino Pauro akati aisa maoko ake pamusoro pavo Mweya Mutsvene wakauya pamusoro pavo. neMweya Mutsvene vakataura nendimi vakaporofita,VaEfeso 4 5. Kana uri kutsvaga Mweya Mutsvene uchitadza kuziva Ishe mumwe nekutenda kumwe nerubhabhatidzo rumwe. kuti sei Ishe vasati vaupa kwauri zvino ungada Vakorose 3 17. Uye zvese zvamunoita kana zviri zveshoko kana basa itai zvese nezita raShe Jesu muchivonga. kuzvibvunza mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa Mwari Baba naye. naPauro Ko makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo I Johane 5 7. Nokuti kune zvitatu zvinopupura kudenga zvinoti Baba Shoko neMweya Mutsvene zvino zvitatu. rwupiko izvi chinhu chimwe,HUPENYU HUNOTEVERA Hupenyu Hunotevera.
Johane 5 28 29 Kana munhu achinga afa ungararamazve. Musashamiswa naizvozvo here ndaimirira hangu mazuva ese. nokuti nguva inouya ekutambudzika kwangu kusvikira. nayo vose vari mumabwiro kusunungurwa kwangu kuchisvika. vachanzwa inzwi rake,Maizodana ini ndikakupindurai maishuva basa. ramaoko enyu,avo vakaita zvakanaka, kukumuka kweupenyu avo Asi zvino munoverenga nhambwe dzangu. vakaita zvakaipa kukumuka hamucherechedze chivi changu here Jobho. kwekutongwa 14 14 16,Jobho angange aisava neBhaibheri rekuverenga asi. Kuchauya zuva apo mumwe nemumwe wedu angave aiziva kuti nerimwe zuva Mwari vaizomumutsa kubva. Mukristu kana chimwe achaona chaizvo izvo zviri mubwiro apo Mudzikinuri wevanhu anouya. kuseri kwechidzitiro chenguva Bhaibheri rinovimbisa Haiwa dai mashoko angu ainyorwa zvino haiwa. Hupenyu Husingaperi kune vamwe uye kune vamwe dai ainyorwa mubhuku. rinovimbisa kutongwa Munhu wese munhoroondo, yese zvirokwazvo akambozvibvunzawo mubvunzo Dai aitemwa nepeni yedare nemutobvu aitemwa. uyu Chii chichaitika kwandiri kana ndafa padombo nekusingaperi. Asi ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu,Kare kare kusati kwambova.
uye kuti pakupedzisira achasimuka panyika,neBhaibheri rekuverenga. muporofita Jobho akatarisa Kunyange ganda rangu richinge raparadzwa. zvisikwa Akataura pamusoro saizvozvo kunyange zvakadaro ndichaona. petariro yemuti kuti Mwari ndiine nyama yangu Jobho 19 23 26. waitemerwa pasi sei wofa Muporofita waitaura pamusoro paIshe Jesu nerumuko. asi nemumunhuwi wemvura rwevanhu vaKe Kubudikidza nechizaruro Jobho. unobukira zvakare kuupenyu waiziva kuti kunyange mitumbi yedu ingaparara. wotungira patsva Jobho Jesu achadzoreredza nyama yedu Uye nemeso. waiziva kuti munhu semuti edu tichaona Kuuya kwaKe Vanhu vese vaMwari. aizomuka zvakare kuhupenyu vanoshuva kuona zuva guru iroro. Zvisinei sekungovapo kuri Mwari kuna iro Ishe Ishe hatina kuporofita muzita renyu. dhiyabhorosiwo zvakare uye sekungovapo here nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu. kweDenga kune gehenawo zvakare Mibhadharo here nekuita mabasa esimba mazhinji muzita. yacho yakakura kupfuura zvatingafungira renyu here Zvino ndichavaudza pachena. MuApostora Pauro akati Izvo zvisina kuonekwa handina kutongokuzivai ibvai kwandiri imi vaiti. neziso kana kunzwika nenzeve nezvisina kupinda vekusarurama Mateo 7 21 23. mumoyo wemunhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira Nekungoti munhu anozviti Mukristu hazvirevi kuti. vanomuda I VaKorinte 2 9 akaponeswa Saka ndiwo mubvunzo wagara uri. Pfungwa dzedu hadzigoni kufunga nezvekubwinya mupfungwa dzedu Ndinogamuchira sei Hupenyu. kuchange kuri Kudenga kana kufunga kutyisa Husingaperi Jesu akatipa mhinduro iri nyore. kwegehena Jesu wakatiudza kuti gehena rakaisvoipa kwazvo Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri. zvekuti zvingave nane dai imwe nhengo yemutumbi Anonzwa shoko rangu nokutenda wakandituma. wedu yaidamburwa pane kupinda njodzi yekuenda ane hupenyu husingaperi haauyi mukutongwa asi. kunzvimbo yakaipisisa iyoyo wabva murufu waenda muhupenyu Johane 5 24. Kana ruoko rwako ruchikugumbusa urwugure zviri Zvinosuwisa kuti pane vanhu vashoma munyika nhasi. nani kwauri kuti upinde muupenyu uri chirema vakazvipira kutora nguva yavo kubva mumazuva avo. pakuenda mugehena mumoto usingadzimwi ane bishapisha kuti vanzwe Shoko raMwari Uye. unamaoko maviri Marko 9 43 patori nevashoma kudarika ivavo vachatenda Shoko. Saka ndiani achaenda Kudenga Uye ndiani achaenda racho pavanenge varinzwa. kugehena Ipfungwa inosuwisa asi Jesu akati vanhu Machechi anotiudza kuti uve munhu akanaka. vazhinji havazogamuchiri mubairo waAri kuda kupa kufunga zvakanaka usanyepa kubirira kana kuba. Pindai nesuwo rakamanikana nokuti suwo rakafara zvino tichaenda Kudenga Havanzwisisi kuti gehena. uye nzira yakapamhamha inoenda kukuparadzwa richange rizere nevanhu vanoita sevanorarama. vanopinda naro vazhinji Nekuti suwo rakamanikana hupenyu hwakanaka Chokwadi ndechekuti hatisi. nenzira inhete inoenda kuupenyu vanoiwana kuenda Kudenga nekuda kwezviito zvedu zvakanaka. vashoma Mateo 7 13 14 kana nekuti tiri nhengo yeimwe chechi Pane. Jesu zvakarewo akati Havazi vese vanoti nzira imwe chete kuHupenyu Husingaperi inova. kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe kubudikidza naJesu Kristu Akatiraira kuti tinofanira. hwekudenga asi anoita kuda kwaBaba vangu KUTENDA Shoko raKe rinova Bhaibheri Zvikasadaro. vari kudenga Vazhinji vachati kwandiri nezuva tingazoponeswa sei. Zuva rekutongwa parichakuvinga uchanzwa here Tsigiro. Uyai imi makaropafadzwa naBaba vangu mugare Jobho 14 12 16. Saizvovo munhu anovata pasi akasamukazve havazomukizve kusvikira denga rapera. nhaka youshe hwakagadzirirwa imi kubva pakuvamba havangamutswi pahope dzavo. kwenyika Mateo 25 34 kana kuti uchanzwa here Haiwa dai muchindivanza henyu pasheori muchindichengeta pakahwanda kusvikira hasha. dzenyu dzapfuura munditemere nguva yakatarwa yamungandirangarira nayo. Ibvai kwandiri imi makatukwa muende kumoto Kana munhu achinge afa ungararamazve here ndaimirira hangu mazuva ose okutambudzika. kwangu kusvikira kusunungurwa kwangu kuchisvika, usingaperi wakagadzirirwa dhiyabhorosi nengirozi Maizodana ini ndikakupindurai maishuva basa ramaoko enyu. dzake Mateo 25 41 Asi zvino munoverenga nhambwe dzangu hamucherechedze chivi changu here. Jobho 19 23 26, Maziso ako paaverenga mashoko aya une sarudzo Haiwa dai mashoko angu ainyorwa zvino haiwa dai ainyorwa pabhuku. Dai aitemwa nepeni yedare nemutobvu aitemwa padombo nekusingaperi. yekutora Uchasarudza kutenda Shoko raMwari here Asi ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu uye kuti pakupedzisira uchasimuka panyika. Kunyange ganda rangu richinge raparadzwa saizvozvo kunyange zvakadaro ndichaona Mwari. ndiine nyama yangu,Uchagarepi muhupenyu husingaperi Mateo 7 21 23. Havazi vese vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwekudenga asi vanoita kuda. kwaBaba vangu vari kudenga, Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro Ishe Ishe hatina kuporofita muzita renyu here nekudzinga.
mweya yakaipa muzita renyu here nekuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Zvino ndichavaudza pachena Handina kutongokuzivai ibvai kwandiri imi vaiti vekusarurama. Mateo 22 14, Nokuti vazhinji vakadanwa asi vakasanangurwa vashoma. Johane 3 16 17, Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe. woga kuti aninani anotenda kwaari arege kufa asi ave nehupenyu husingaperi. Nokuti Mwari haana kutumira Mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika asi kuti nyika. iponeswe naye,Johane 5 24, Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri Anonzwa shoko rangu nokutenda wakandituma ane. hupenyu husingaperi haauyi mukutongwa asi wabva murufu waenda kuupenyu. I VaKorinte 2 9, Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi Izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwika nenzeve nezvisina. kupinda mumoyo wemunhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira avo vanomuda. I VaTesaronika 4 13 18, Zvino hama dzangu handidi kuti mushaiwe ruzivo pamusoro pevavete kuti murege kuchema.
savamwe vasina tariro, Nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa akamukazve saizvozvowo avo vakavata muna Jesu Mwari. achavauyisa pamwe chete naye, Nekuti tinokuudzai neshoko raShe kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe. hatingatongodzivisi vakavata, Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi remutumwa mukuru. nehwamanda yaMwari vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe. mudenga naizvozvo tichava naShe nguva dzose,Naizvozvo nyaradzanai namashoko aya. CHIVI CHEPAKUTANGA Chivi Chepakutanga, Genesi 3 1 Ichi ndicho chivi chekutanga chakanyorwa.
Zvino nyoka yakanga muBhaibheri Chisikwa chinamano kupfuura zvese. inamano kupfuura mhuka chikara chakanyengera Evha mukudya chimedu. dzose dzesango dzakanga chemuchero usingabvumirwe Akaudya ndokuzoupa. dzaitwa naJEHOVHA Mwari kumurume wake zvakaita kuti vacherechedze kuti. Ikati kumukadzi Nhai ndizvo vakanga vasina kusimira. here kuti Mwari wakati Regai,kudya miti yese yomunda. Mibvunzo iri pachena ndeyekuti Ko nyoka,ingataure sei Apurosi ringave nechii. chekuita nekusasimira Uye mbeu,Genesi 3 6 7 yenyoka inokwana papi mune izvi. Zvino mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa. uye kuti unofadza meso uye kuti muti unodikanwa Bhaibheri rinotaura kuti nyoka. kungwadza munhu akatora muchero wawo akadya yaiva namano kudarika. akapawo murume wake pamwe naye iye akadya mhuka dzose Yaiva yakaita. Ipapo meso avo ivo vaviri akasvinudzwa vakaziva kuti semunhu zvokuti yaikwanisa. havana kusimira vakasonanidza mashizha emuonde kufamba kutaura uye nokuva. vakazviitira nguwo nehurukuro ine hungwaru,Mushure mokunyengera. Genesi 3 14 15 mudzimai waAdhama Mwari, Zvino JEHOVHA Mwari akati kunyoka Zvawaita izvozvo wakaituka ikava nyoka asi.
watukwa kupfuura zvipfuwo zvose nekupfuura mhuka kwete kuparadza kusati. dzese dzesango uchafamba nedumbu rako uchadya huruva kwaitwa uye nembeu isati. mazuva ose ehupenyu hwako yadyarwa, Zvino ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi nepakati Bhaibheri rinotaura munaGenesi. pembeu yako nembeu yake iyo ichapwanya musoro wako 3 15 kuti nyoka yaiva nembeu. newe uchapwanya chitsitsinho chayo zvino Mwari akaisa ruvengo pakati. pembeu mbiri idzi Zviri pachena kuti, mbeu yenyoka yakasangana nembeu yepanyama Genesi chinoreva kuunza kwaakaita mbeu yake. yaEvha pasati pava nekupatsanurwa Ko zvese izvi nekuzviunza kana kuzvipinza murudzi rwevanhu. zvingagokonzerwa nekudya apurosi sei Zvadaro Zvakare rangarirai kuti Satani anonzi nyoka. mavhesi mashoma akatevera Adhama akadana Imbeu yake kana kuti kuzvipinza kwake murudzi. mudzimai wake kuti Evha nokuti ndiye amai wavose rwevanhu kwatiri kutaura nezvako. vanorarama Cherechedzai kuti hariti Adhama aiva,Adhama asati ambova neruzivo rwepanyama. baba wavose vanorarama,rwaEvha nyoka yakava neruzivo urwu mberi. Pane michero yakasiyana siyana muBhaibheri kwake Uye mwana wayo ndiKaini Kaini aiva. Hongu pane muchero chaiwo seapurosi rinokura uyo akabarwa akaberekwa ne Wakaipa I. rodyiwa sechikafu Panewo muchero unoreva mabasa Johane 3 12. edu angave mabasa epanyama sekurima nebhizimu,Chokwadi chenyaya ndechekuti Evha.
kana mabasa emweya sekuita zvishamiso nekuparidza,aiva nevanakomana VAVIRI mumimba yake. Vhangeri Zvino panozoita muchero wechibereko,mapatya kubva kumbeu DZAKASIYANA Aiva. unoreva kubata mimba nekusununguka mwana,akatakura mapatya nemimba yaKaini yaAbheri. Kudya muchero chaiwo kungapa Adhama naEvha isati yabata. kunzwisisa kwekuti vakanga vasina kusimira here Kana. kuti kungatora ukama hwepanyama pakati pemurume, nemudzimai kuti vese vanzwisise kuti sei vachifanira. kufukidza nhengo dzakatsaurwa dzemitumbi yavo, Chii chakanyatsoitika zuva riye muBindu kuti rudzi.
rwose rwevanhu rwugowa,Sezvo Mbeu yemudzimai yaiva Mwari. achizvibereka pachaKe munyama yevanhu,saizvozvo mbeu yenyoka ndiyo nzira chaiyo. iyo Satani akaona kuti aikwanisa kuzvizarurira,mukova murudzi rwavanhu Zvaisagoneka. kuti Satani nokuti iye angori munhu mweya,AKASIKWA azvibereke nenzira iyo Mwari. aiZvibereka nayo saka chiitiko chemuna,Genesi 3 6 7.
Zvino mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa uye unofadza meso uye kuti muti. unodikanwa kungwadza munhu akatora muchero wawo akadya akapawo murume wake pamwe. naye iye akadya, Ipapo meso avo ivo vaviri akasvinudzwa vakaziva kuti havana kusimira vakasonanidza. mashizha emuonde vakazviitira nguwo, Vaigoziva sei kuti havana kusimira nekungodya chimedu chemuchero. Genesi 3 13 15, JEHOVHA Mwari akati kumukadzi Chinyiko chawaita Mukadzi akati Nyoka yandinyengera. JEHOVHA Mwari akati kunyoka Zvawaita izvozvo watukwa kupfuura zvipfuwo zvose. nokupfuura mhuka dzese dzesango uchafamba nedumbu rako uchadya huruva mazuva ose. ehupenyu hwako, Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi nepakati pembeu yako nembeu yake iyo. ichapwanya musoro wako newe uchapwanya chitsitsinho chayo. Chikara chaiva nembeu Zviri pachena kuti izvi hazvirevi nyoka. Genesi 3 20, Adhama akatumidza mudzimai wake zita rokuti Evha nokuti ndiye mai vevapenyu vose.
Sei Adhama asiri kudanwa kunzi baba vevapenyu vose. Genesi 4 1 2, Zvino Adhama akaziva mukadzi wake Evha iye ndokutora mimba akapona Kaini akati. Ndawana munhu ndichibatsirwa naJEHOVHA, Akaponazve munin ina wake Abheri Abheri wakanga ari mufudzi wamakwai asi Kaini wakanga. ari murimi wevhu, Hupenyu hwese hunobva kuna Mwari zvisinei kuti hwauya nehupombwe kana kwete Satani. haagone kusika hupenyu, Aiva mwanakomana waEnosi mwanakomana waSeti mwanakomana waAdhama. mwanakomana waMwari,Kaini dangwe murudzi rwaAdhama uripi.
I Johane 3 12, Tisingaiti saKaini wakanga ari wowakaipa akauraya munin ina wake Wakamuurayireiko. Nokuti mabasa ake akanga akaipa asi emunin ina wake akanga akarurama. Mwari vakasika Adhama ari mumufananidzo waVo Ko huipi hwaKaini hwakabvepi uye kururama. kwaAbheri kwakabvepi Hunhu hwavo vakahuwana kubva kumadzibaba avo. Judhasi 1 14, Enoki zvakare wechinomwe kubva kuna Adhama akaporofita ivava achiti Tarira Ishe wakauya. navatsvene vake vane zviuru gumi, Hapana muBhaibheri apo Kaini paari mudzinza raAdhama.
Guide to scholarships fellowships and grants for students
Uttarakhand civil judge jd pre exam 2018
10 tips for cutting your word count university of adelaide